INDAWO YOKUHLALA NGOKUSEMTHETHWENI NGOTYALO-MALI ePortugal | IXESHA LE-100% LEMPUMELELO | ENGABEKI NXAXOLO | IGISA LOKUNDWENDWELA iPortugal, ukuFudukela kwezoqoqosho ngokutyala imali yokuhlala ePortugal ngotyalo-mali ePortugal, ukuhlala ngokutyala imali ePortugal, ukuhlala ngokuqhubeka kotyalo-mali
Ukuhlala kwakhona ngokuTyala imali ePortugal nakwiVisa yeGolide
Sinikezela ngeeNkonzo zoFuduko lwezoQoqosho ePortugal:
● Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali ePortugal
● Ubummi ngotyalo-mali oluvela ePortugal
● IVisa yegolide ePortugal
● Ipasipoti yesibini evela ePortugal
● Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali ePortugal ngokutyala izindlu nomhlaba
Best Iiarhente zokuHlala kwakhona ngoTyalo mali ePortugal Kunye namagqwetha ee Ukuhlala kwakhona ngotyalomali ePortugal kunye nabarhwebi beepropathi zokuba ngumhlali ePortugal basebenza ngokudibeneyo kukhuseleko lwabathengi.
Ukuhlala kwakhona ziiarhente zotyalo mali ePortugal kubonelela ngeenkonzo zokuhlala ngokutyala imali ePortugal, ukuhlala kwakhona ngeenkqubo zotyalo mali ePortugal, ukuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo mali ePortugal, ukuhlala kwakhona kwesibini ngokutyala imali ePortugal, ukuhlala kubini ngokutyala imali ePortugal, ubumi kunye nokuhlala ngokutyala imali ePortugal. , Ukuhlala ngokusisigxina ngokutyala imali ePortugal, ukuhlala okwethutyana ngokutyala imali ePortugal, ukuhlala kwakhona ngesikimu sotyalo mali ePortugal, ukuhlala kwakhona ngezikim zotyalo mali ePortugal, Ubummi ngotyalo mali ePortugal, Ubummi ngeenkqubo zotyalo mali ePortugal, Ubumi ngenkqubo yotyalo mali ePortugal, okwesibini Ubummi ngotyalo-mali ePortugal, ubumi bobabini ngotyalo-mali ePortugal, indawo yokuhlala kunye nobumi ngokutyala imali ePortugal, ukuhlala kunye nokuba ngummi ngokutyala imali ePortugal, iinkqubo zoBumi kwezoqoqosho ePortugal, Ubummi ngesikimu sotyalo-mali ePortugal, Ubummi ngezikimu zotyalo-mali ePortugal, okwesibini ipaspoti kwi IPortugal, inkqubo yesibini yokundwendwela ePortugal, inkqubo yokundwendwela yesibini ePortugal, ipasipoti yesibini ePortugal, indawo yokuhlala kunye nepasipoti yesibini ePortugal, ipaspoti yesibini yozakuzo ePortugal, ipasipoti yesibini kutyalo-mali ePortugal, ipasipoti yesibini yokuba ngummi ePortugal, inkqubo yepasipoti yesibini IPortugal, izikimu zepasipoti zesibini ePortugal, i-visa yegolide ePortugal, ii-visa zegolide ePortugal, iinkqubo zevisa zegolide ePortugal, inkqubo yegolide yegolide ePortugal, i-visa yesibini yegolide ePortugal, inkqubo yesibini yegosa yegolide ePortugal, i-visa yegolide ezimbini ePortugal, ubumi kunye ne-visa yegolide ePortugal, ukuhlala kunye ne-visa yegolide ePortugal, ukuba ngummi we-visa yegolide ePortugal, inkqubo ye-visa yegolide ePortugal, izikimu ze-visa zegolide ePortugal.
"1 izisombululo zokumisa" kuko konke ukuhlala kwakho ngokutyala imali ePortugal ngenkxaso eyongezelelweyo.
Utyalo-mali oluncinci ePortugal lokuHlala kwakhona ngokutyala: EUR 350,000
Intshayelelo iPortugal kunye nokuhlala kwakhona ngoTyalo mali
Funda ngakumbi ngePortugal
IPortugal iyaxatyiswa kakhulu ngokuhamba nje okungaqhelekanga kobomi… kwaye ngokweemeko zangoku! Olu luhlanga olukhethekileyo olufudumeleyo nolunesisa kwaye luye lwashicilelwa kwezona zizwe zintathu zibekwe njengezona ndawo zivuyisayo zangaphambili.
Ngo-2019, uPhononongo lwangaPhakathi oluHlola ngaphakathi lwabeka iPortugal kuqala ukoneliseka buqu. Abathathi-nxaxheba abathathe inxaxheba kuphononongo bathethe ngokukodwa imeko yemozulu kunye neatmosferi ngelixa impilo kunye nokhuseleko zongeze amanqaku aphezulu ngabathile ababephethe iPortugal ukusukela oko yayinokhuseleko.
Ukukhawuleza kunye nexesha ePortugal linokwahluka kwisizwe sakho semvelaphi. Akujongwa njengokungakhathaleli ukubonisa kamva kunokubhukisha, kwaye amaqela anokucwangciswa ngokungathandabuzekiyo, umzekelo, 'ngokuhlwa kwangoko', endaweni yexesha elithile. Nangona kunjalo, kwithuba lokuba umntu abaleke ngaphezulu kwemizuzu engama-30 emva kwexesha kwintlanganiso okanye kwintlanganiso, kuyazi ukuba unxibelelane nomphathi wakho ukuze umxelele. Ukuzama ukunikela ingqalelo kunye nokuqonda ukuba ungaluqonda njani usuku lwabo ngokuhamba kobomi.
Ixesha lihlala ligcinwa ngeyure ezingama-24, ke khumbula oku xa ubhukisha iindibano okanye amalungiselelo. AmaPhuthukezi anonxibelelwano oluqinileyo ngokukodwa kusapho. Oku kucace gca kulutsha, olujonge ubomi nabantu babo kude kube kwiminyaka yabo yamashumi amabini ngoku nangoku ukuya kumashumi amathathu. Oku kunokuba ngenxa yezizathu zemali, kodwa kuhlala kuchazwa ngokungathandabuzekiyo ukuba ukupheka kukamama kunye neempahla ezicocekileyo kuyahlaziya kakhulu. Ewe, iiyunithi zosapho lwasePortugal zisaqhelekile. Amanenekazi ngokubanzi aya kwenza uninzi lwemisebenzi ejikeleze indlu, kubandakanya ukupheka nokucoca kwiindibano nakwiminyhadala.
Ukuqonda inkcubeko yesiPhuthukezi kuya kukunceda ekufumaneni indawo kunye nohlanga lwakho olutsha. Iintsapho zamaPhuthukezi zithanda ukwamkela iindwendwe kwaye xa abakhenkethi betyelele iindawo zabo ezisezidolophini okanye iidolophu, bayathanda ukuqhelana nabo. Le inokuba yindlela engaqhelekanga yokwenza imibuzo, yokuhlangana nabantu abatsha, kunye nokongeza ukuqonda kweendibano ePortugal.
Xa usamkela kwikhaya lomntu, kulungile ukuzisa intsikelelo encinci, umzekelo, iwayini, iintyatyambo, okanye into emnandi. Kwimeko apho wamkelwe ngaphezulu kwesidlo sangokuhlwa, zama ukubonakalisa ishedyuli, ngaphandle kokubona izinto eziqhelekileyo kwilizwe lethu. Isidlo ePortugal sihanjiswa rhoqo malunga ne-7-8 pm, kwaye isidlo sasemini sithathwa phakathi kwe-12-3 pm.
Ewe, amaPhuthukezi abhiyozelwa ngenkululeko yawo. Uya kubafumanisa benobubele kwaye bemema kwaye bafunde isahlulo seziyelelane ezikufutshane ziya kuya kude ukunceda ekuchongeni abantu bendawo. Iindleko eziqhelekileyo eziqhelekileyo zezinto ezisisiseko ePortugal ziya kuxhomekeka kakhulu kwisiqwenga sesizwe ogqiba ukuhlala kuso.
I-condo entle kwisiqwenga esidumileyo sedolophu enkulu ingena ngexabiso eliphantsi kwe- € 1,123 ngeyure yokubhala ngo-2019. Olu lwazi oluhle kakhulu kuye nakubani na onengeniso esisigxina enemali eyaneleyo yokonga amatyala kunye neendleko zokuhlala. Unokuba nethemba lokuhlawula ipremiyamu ukuze uhlale kwilizwe elinje kodwa iPortugal yeyona nto iphambili phakathi kwezinye iindawo ezifanelekileyo eYurophu. Zonke ezi zinto zinomtsalane zenze iPortugal yaba yenye yezichaso zehlabathi kulutsha oluhambele phambili.
Kwimeko yokuba ukhe walangazelela ukuqhubeka nobomi njengomhambi ohambele phambili, ekhululwe kubo bonke ubudlelwane, ngelo xesha iPortugal inokukunika yonke into oyifunayo. Ngokunxibelelana ngokuthozamileyo, ukufikelela okukhulu kwiwebhu, ubuninzi beendawo ezisebenzisanayo, kunye nenethiwekhi ekhulayo yekhompyuter, ayothusi into yokuba yeyona njongo yesigqibo se-millennials. IPortugal lizulu labashenxisi elaziwayo kwaye, ngenxa yesimo salo sobume bendawo, lifumana uMntla, iNtshona, kunye noMazantsi adumbayo athetha ukuba kukho indawo ethembekileyo yecandelo elifanelekileyo lonyaka.
Iinkcukacha ezisisiseko sokuhlala ngokuTyala imali ePortugal
Ubuncinci botyalomali Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali ePortugal
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali ePortugal
IPortugal iGold Visa
Iqhubekeka nexesha lokuhlala ngokutyala iPortugal
Emva kwe-6 iminyaka
Iintsuku ezisi-7 ukuya kwezi-14 ngonyaka
Ubumi obuBini buvunyelwe kubemi basePortugal
Iinketho zotyalo mali ze Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali ePortugal
Ukuthengisa izindlu nomhlaba / Umnikelo / ishishini
Kutheni uye kuhlala kwindawo yokuhlala ngokutyala iPortugal
IPortugal yindawo ethandwayo yokuhamba, ilizwe elililungu le-EU elinezikolo ezigqwesileyo kunye neeyunivesithi, inkqubo yokhathalelo lwempilo yodidi lokuqala, indawo entle nekhuthazayo yabucala kunye neyamashishini, kunye nobulungu bommandla weSchengen. Inkqubo yemvume yokuhlala yegolide yenye yeendlela ezikhawulezayo nezona zifikelelekayo ezikhoyo ngoku eYurophu, ezivumela umenzi-sicelo kunye namalungu osapho asondeleyo ukuba ahambe ngaphandle kwe-visa ngaphakathi kwendawo yaseSchengen.
Ukufudukela kosapho ePortugal
Inkqubo yokudityaniswa kosapho ivumela amalungu osapho asondeleyo ukuba afumane ubumi basePortugal. Amalungu osapho asondeleyo athathelwa ingqalelo njengeqabane okanye iqabane, abantwana abangaphantsi kweminyaka, abantwana abaxhomekeke ngaphezulu kwe-18 ukuba abatshatanga kwaye baceba ukufunda ePortugal, kunye nabazali abaxhomekeke kuwe. Ezinye izalamane zinokufaneleka kwimeko-ngamatyala, ngokusekwe kwiimeko zomntu.
Ubungqina bepropathi yokuhlala kunye nengeniso ubuncinci be-EUR 12,000 ngonyaka kumntu ngamnye omdala kunye ne-EUR 6,000 yomntwana ngamnye baya kucelwa ukuba babonise.
Ukuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo-mali ePortugal
Njengoko sele kukhankanyiwe le nkqubo yenye yezona zikhawulezayo kwihlabathi ukuthatha iinyanga ezi-2-5. Ukuba isicelo siqinisekisiwe imvume yokuhlala okwethutyana inikwa isebenze unyaka omnye. Kwiminyaka emi-1 inye, le nto inokuhlaziywa kabini. Emva kweminyaka emi-2 yokuhlala, umfaki sicelo unelungelo lokukhupha ubume bokuhlala ngokusisigxina. Emva konyaka omnye wokuhlala isigxina, umenzi-sicelo unelungelo lokuba ngummi wasePortugal kunye nepasipoti.
Akukho bango lokuhlala ePortugal yakuba nje imvume yokuhlala inikwe uhambo olunye ukuya ePortugal ngexesha lenkqubo yokwenza isicelo. Ekuphela kwento efunwayo ziintsuku ezisixhenxe kwilizwe lokuqala kunyaka wokuqala, kunye neentsuku ezili-7 kule minyaka mibini izayo.
Imfuno yemali yePortugal
Kukhethwe iindlela ezintandathu ezinokubakho ukuze ufumane ubummi basePortugal ngotyalo-mali. Umzekelo, umtyali mali unokuthenga iarhente yokuthenga izindlu nomhlaba ubuncinci be-EUR 500000, enze utyalomali olukhulu kwiakhawunti yebhanki yasePortugal okanye enze utyalomali oluguquguqukayo ubuncinci be-EUR 1 yezigidi, enze ubuncinci bemisebenzi eyi-10 ePortugal, anikele okungenani nge-EUR Ama-350 000 kwimisebenzi yophando, nikela nge-EUR 250 000 ubuncinci ukukhuthaza ubugcisa kunye nokulondolozwa kwelifa lemveli lenkcubeko, okanye utyale i-EUR 500 000 ubuncinci kwimisebenzi yophando.
Ukongeza kutyalo-mali, iintlawulo zomrhumo osemthethweni we-EUR 20,000 kumtyali mali ophambili kunye ne-EUR 4,000 kwilungu ngalinye losapho ziyimfuneko.
Inkxaso yabathengi kubuhlali ngokutyala imali ePortugal
Iqela lethu Kuhlala Ngabameli botyalo mali ePortugal kwaye Kuhlala ngoTyalo-mali Amagqwetha yePortugal ibonelela abathengi kunye neentsapho zabo ePortugal ngenkxaso yobummi ngotyalo-mali oluvela ePortugal, indawo yokuhlala ngokutyala imali evela ePortugal kunye namanye amathuba otyalo mali, kumazwe angama-37.
Iinkonzo zethu aziphelelanga nje ekuhlaleni ngokutyala imali evela ePortugal okanye kwiVisa yaseGolide evela ePortugal okanye ubumi ngotyalo-mali oluvela ePortugal okanye ipasipoti yesibini, sikwanceda nakwezona mali zilungileyo zokufumana izindlu ePortugal, ukubonelela ngesisombululo esipheleleyo ukuba ufuna ukuseka inkampani IPortugal okanye elunxwemeni, izibonelelo zabantu ePortugal nokunye okuninzi, okubandakanya ukucwangciswa kwemali nokunye okuninzi.
Ukunceda abathengi bethu ngezisombululo ezisekwe kubemi ngaphakathi nasePortugal nakwindawo yokuhlala yesibini.
Inkxaso ekhethekileyo kubemi basePortugal:
Sibonelela ngexabiso eliphantsi Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo-mali IPortugal, ngokufikeleleka kwethu Utyalo-mali kunye nomthetho wokungena EPortugal, abarhwebi abafudukela kwamanye amazwe abafikelelekayo ePortugal, indawo yokuhlala efikelelekayo ngabacebisi botyalo-mali ePortugal, indawo yokuhlala efikelelekayo ngamagqwetha otyalo-mali ePortugal kunye nefemi yokubonelela ngokufudukela ePortugal.
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali ukusuka ePortugal ukuya kumazwe angama-37.
Visa yegolide ePortugal ukuya kumazwe angama-37.
Ubumi ngokutyala imali ukusuka ePortugal ukuya kumazwe angama-37.
Ipasipoti yesibini ukusuka ePortugal ukuya kumazwe angama-37.
Ukufuduka okusekwe kwishishini ukusuka ePortugal ukuya kumazwe ayi-106.
Ukuhlala kwakhona ngeenkqubo zotyalo-mali ezivela ePortugal.
Iinkqubo zevisa ezimnandi ePortugal ukuya kumazwe angama-37.
Ubumi ngeenkqubo zotyalo-mali ukusuka ePortugal ukuya kumazwe angama-37.
Iipasipoti yesibini ukusuka ePortugal ukuya kumazwe angama-37.
Iinkqubo zokufuduka kweshishini ukusuka ePortugal ukuya kumazwe angama-106.
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali ePortugal ngokuThengisa izindlu
Sibonelela ngenkxaso kutyalo-mali lokuthengiswa kwezindlu kunye nomhlaba ePortugal ngombono wokuba umthengi kufuneka afumane imbuyekezo entle kutyalo-mali ePortugal, nanini na, xa befuna ukuphuma kutyalo-mali olwenziwe ngabo ngokuhlala kwabo ngokutyala iPortugal. Sidibene nabaphuhlisi abambalwa bezindlu ePortugal abanerekhodi elungileyo kwaye ipropathi yabo ikwindawo ezilungileyo ePortugal, belanda eyona mbuyekezo.
Eyona nkqubo yokuhlala kwezindlu ePortugal notyalo mali kwiarhente yokuthengisa izindlu nomhlaba ePortugal.
Kufuneka uyazi-iPortugal Residency by Investment
Ukuhlala kwakhona nguGqwetha loTyalo-mali ePortugal kuya kubonelela ngoncedo lwamaxwebhu acacisiweyo ukuze ube yimpumelelo yokuhlala kwakho ngokutyala imali ePortugal. Iinkonzo zethu eziqhelekileyo zokuba nguMhlali ngokuTyala ePortugal kubandakanya:
Amagqwetha ethu aya kuziqonda iimfuno zakho zokufuduka ePortugal okanye ePortugal, ngokusekwe kwiziphakamiso eziza kwenziwa
Siqala ngenkuthalo ngenxa yokukhuthazeka, ukulungiselela ingxelo ngaphambi kokucebisa ukuba ngumhlali ngokutyala imali ePortugal kubaxhasi ngokufumana imvume yokuhlala ePortugal kunye nokunciphisa umngcipheko wokwala.
Ngokusekwe kwingxelo yenkuthalo yePortugal, sikwacebisa ezinye iinkqubo zempumelelo engcono.
Ukuze siqhubele phambili ngokuhlala kwakho ngokufaka isicelo sokutyala imali ePortugal kuya kufuneka ukuba sikhuphele iikopi zabathengi kunye namalungu epasipoti.
Inguqulelo kunye ne-apostille yamaxwebhu Ukuhlala kwakhona ngesicelo sotyalomali ePortugal. Amagqwetha ethu awodwa okuhlala ngokutyala iPortugal kunye negosa legolide liya kunceda ekugcwaliseni iifom namaxwebhu.
Nje ukuba amaxwebhu akho okuhlala kwakhona nosapho lwakho afumane isicelo sokutyala iPortugal, siya kuyizalisa ngabasemagunyeni abafanelekileyo basePortugal.
Nje ukuba isicelo sakho sokuhlala ngokutyala iPortugal sivunyiwe, sabelana nawe ngeendaba ezimnandi kwaye siqala ukulungiselela ezinye inkxaso.
Asikuxhasi okanye ukubonelela ngobumi ngeenkonzo zotyalo mali ePortugal kubantu abakhankanywe ngezantsi okanye amashishini ePortugal:
Kuhlala ngeenkonzo zotyalomali ePortugal azinikezelwa kubaRhwebi okanye abasasazi beengalo neembumbulu ezisuka okanye ePortugal.
Kuhlala ngeenkqubo zotyalo-mali lwePortugal azinikezelwanga ukugada kwezobuchwephesha ePortugal okanye kwi-espionage yemizi-mveliso yeenkqubo zotyalo-mali ngaphakathi okanye ukusuka okanye ukuya ePortugal.
Kuhlala ngokubonisana notyalo mali ePortugal azinikezelwa ngayo nayiphi na imisebenzi engekho mthethweni okanye yolwaphulo-mthetho ePortugal.
Kuhlala ngenkxaso yotyalo mali yePortugal ayisiyonto yabantu abajongana nemathiriyeli yemfuza ePortugal.
Kuhlala ngeenkonzo zotyalomali ePortugal ayisiyo yamashishini ajongene nezixhobo ezinobungozi okanye eziyingozi zebhayoloji okanye zenyukliya ePortugal.
Kuhlala ngenkqubo yotyalo mali Inkxaso yePortugal ayifumaneki kubantu basePortugal abasebenza kurhwebo, ukugcinwa ePortugal, okanye ukuthuthwa kwamalungu oLuntu.
Kuhlala ngotyalo-mali yePortugal ayizizo iiarhente zokwamkela abantwana ngokungekho mthethweni.
Kuhlala iinkonzo zenkqubo yePortugal ayizizo ezenkolo kunye neminikelo yabo yokunceda ePortugal.
Kuhlala ngeenkonzo zotyalo-mali kwi Photshugo ayibonelelwa ngabantu abajongana nemifanekiso engamanyala ePortugal.
Indawo yethu yokuhlala Amagqwetha ePortugal abaxhasi ukurhweba ngokuthengisa iziyobisi ePortugal.
“Isaziso Esibalulekileyo : Izisombululo zeMM INC zithatha amanyathelo afanelekileyo okuqinisekisa amaxwebhu e-AML kubaxhasi bePortugal kunye ne-KYC yabo kodwa asamkeli naluphi na uxanduva malunga nokwaliwa kwabasemagunyeni ePortugal ukuvunywa kwesicelo Kuhlala ngotyalo-mali ePortugal.
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali ePortugal nakwamanye amazwe, kunye nezinye izinto ezininzi ezixhasayo.
Sibonelela ngeyona ndawo yokuhlala eyiyo ngenkxaso yotyalo-mali ePortugal yotyalo-mali, ukufudukela kwelinye ilizwe kunye nocwangciso lwezindlu ePortugal.
Ixhaswe kukuhlala kwamazwe ngamava otyalo-mali kunye neemfuno zomthetho zasePortugal, senza ezona zisombululo zilungileyo.
Indawo yethu yokuhlala ngeenkonzo zotyalo-mali ePortugal zibonelela ngexabiso eliphantsi, ngezinga lempumelelo ePortugal.
Sithathe iminyaka yamava okuhlala kwakhona ePortugal sixhasa abathengi kunye neentsapho zabo ePortugal.
Amava okuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo mali ePortugal kunye nabameli bezomthetho ePortugal ababonelela ngenkxaso kubaxhasi.
Sinezona solicitors zintle kunye neearhente zenkqubo yokusingatha iPortugal kunye nesicelo esizinikele kwimpumelelo yakho.
Ngaphambi kokuhlala kwakho ePortugal nasemva kokuvunywa, ilungu lethu leqela eliphambili liya kuba lapho ngeshishini okanye ngenkxaso yobuqu ePortugal
Sinamava aphesheya kubuhlali ngokutyala kubandakanya iPortugal, ukunceda abathengi abavela kwihlabathi liphela ngeenkonzo ezilungileyo.
Kwimeko apho ukuhlala kwakho ngokutyala imali ePortugal kungaphumeleli, kukho amanye amazwe angama-36 esiwasebenzisayo, sikulungele ngesicwangciso B.
Bala iindleko zokuHlala kwakhona ngokuTyala ePortugal
Ukubala iindleko zokuhlala kwakhona ngokutyala imali ePortugal nceda ugcwalise zonke iinkcukacha kubandakanya amalungu osapho kunye nobudala babo. Ngenxa yenani elikhulu labathengi bePortugal, siyakwazi ukubonelela ngeenkonzo ezingcono ngexabiso eliphantsi. Ukubala kuya kubandakanya, kubandakanya, iindleko zokuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo-mali ePortugal kunye nezinye iindleko.
Iintlobo ze ivisa yePortugal
Inkqubo yemvume yokusebenza ePortugal
Ukuhlala okwethutyana ePortugal
Indawo yokuhlala isigxina ePortugal
Oonozakuzaku kunye nabameli bePortugal
Ukuhlala kwakhona ngoTyalo-mali ePortugal nakwezinye iiNkonzo
Sidwelise ezinye iinkonzo ezimbalwa esizibonelelayo ePortugal ngeemfuno zangoko okanye ezizayo.
Ukuba uceba ukuhambisa usapho lwakho ePortugal ngokutyala, thina njengeqabane lakho lePortugal, sikhona ukubonelela ngezinye iinkonzo ezininzi kunye nexesha onokufuna ngalo ePortugal ngamaxabiso afikelelekayo.
Ngaphandle kokuhlala ngokubonisana notyalo mali ePortugal, sibonelela ngeshishini, i-IT kunye neenkonzo zeHR nakwiPortugal, ongazukuyifumana phantsi kwesambrela esinye esibonelelwe ngabaphi na abanye abacebisi basePortugal besenza ivenkile enye ePortugal nakumazwe ayi-106.
"Sityalile iminyaka yokulinga kunye nehlabathi jikelele kumazwe angama-106 ukunceda iintsapho, abantu, kunye neshishini lasePortugal ekufezekiseni iinjongo kunye neminqweno yabo."
Siyayixhasa indlela yabathengi bethu engaphaya kokuHlala ngokutyala imali ePortugal ngoncedo lwamagqwetha ethu, abacebisi kunye nokudibana ePortugal nakwamanye amazwe.
Inkampani e Portugal
Singakunceda bhalisa inkampani ePortugal okanye amazwe ase-Offshore kunye namazwe angama-106 (Iindleko zokubhalisa inkampani ePortugal zitshiphu kuthi.)
Iakhawunti yeBhanki ePortugal
Nawuphi na umtyalomali ofudukela ePortugal uya kuyidinga iakhawunti yebhanki yakho ePortugal kunye neakhawunti yebhanki yenkampani ePortugal, sinokunceda kwiiakhawunti zebhanki ezingaselunxwemeni.
Isango lokuhlawula ePortugal
Ngaba ufuna ukubonisana ePortugal, kuba izisombululo zentlawulo yedijithali ePortugal Njengendlela yokuhlawula yesiko okanye fintech ePortugal okanye kwizisombululo ze-crypto, masixelele.
Emva kokuhlala kwakhona ngokutyala imali IPortugal ukuba uceba qala ishishini ngokuthenga ishishini esele likho ePortugal ukuqala kwangoko ePortugal.
Iinkonzo zabasebenzi ePortugal
yethu Inkampani yabasebenzi ePortugal inokukunceda ngokugaya abasebenzi ngokukhawuleza. Unako kwakhona izithuba ezikhoyo ePortugal free.
Iinombolo zeFowuni eyiNene ePortugal
Iinkqubo zeefowuni zeshishini ePortugal kunye amanani abonakalayo ePortugal Amazwe angama-102 kunye nezixeko ezingama-291.
Iinkonzo zoCwangciso lwezeMali ePortugal
Accounting, ngenxa yenkuthalo ePortugal kunye okuninzi kakhulu.
Idilesi yeOfisi eyiyo ePortugal
Ukuseta ishishini ePortugal
Emva kokuhlala kwakhona ngokutyala imali ePortugal, ukuseta ishishini kwi Photshugo.
Sinikezela ngezisombululo ezingezantsi ze-IT ePortugal
Uyilo lwewebhu ePortugal
Uphuhliso lwezoqoqosho kwiPortugal
Uphuhliso lwewebhu ePortugal
Uphuhliso lweBlockchain ePortugal
Uphuhliso losetyenziso ePortugal
Uphuhliso lweSoftware ePortugal
Amagqwetha okuhlala kwakhona ngoTyalo mali ePortugal
Sibonelela ngokuhlala ngokusemthethweni ngokwesisombululo sePortugal kwaye impumelelo kubaxumi bethu ibaluleke kakhulu, kuba iPortugal, siziinkokheli, ifemu yethu yezomthetho ePortugal ineearhente zokufudukela ePortugal, saziwa ngokuhambisa awona mava okusebenza kubathengi ePortugal kunye Izisombululo ezicacileyo zotyalo-mali kubantu basePortugal kunye neentsapho zabo. Ukuhlala kwethu liqela lotyalo-mali ePortugal kubonelela ngezisombululo eziyilwe ngempumelelo yoMthengi.
Amalungu osapho lwakho (abantwana, inkosikazi, abazali) banelungelo lokufumana imvume yokuhlala ePortugal, xa imvume yakho yokuhlala ePortugal ivunyiwe.
Amandla egqwetha lasePortugal ayafuneka kuwo onke amanyathelo asemthethweni egameni lakho ngoKuhlala kwakhona ngabaceli botyalo mali ePortugal. Ukuba usePortugal okanye uceba ukutyelela iPortugal, sinokufumana amandla akho egqwetha apha.
Asibizi mali ingaphezulu ngokufumana Amandla egqwetha. Ukuba uceba ukuqala ubhaliso lwenkampani ePortugal ukude, amandla akho egqwetha kufuneka abhaliswe ngokusemthethweni ukuba asetyenziswe kummandla wasePortugal. Kuxhomekeka kwilizwe ohlala kulo, kufanele ukuba ukhubeke okanye ubhaliswe ngokusemthethweni ngummeli wasePortugal.
Imibuzo ebuzwa qho-Ukuhlala kwakhona ngoTyalo mali ePortugal
Iyintoni inkcazo yokuhlala ngokutyala imali ePortugal?
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali ePortugal, kunokuchazwa njengokufumana indawo yokuhlala ePortugal ngotyalo-mali kuqoqosho lwasePortugal ngeendlela ezahlukeneyo ezifana, neshishini, izindlu nomhlaba, iibhondi zikarhulumente, njl. Faka isicelo sokuhlala ngokutyala imali ePortugal, ukuhlala kwenkqubo yotyalo mali ePortugal. ixhaswe kukuhlala ngeenkonzo zotyalo mali ePortugal, ngokuhlala kwethu ngokugqwesileyo ngamagqwetha otyalo mali ePortugal, indawo yokuhlala eyiyo ngamagqwetha otyalo mali ePortugal kunye nokuhlala okungcono ngabacebisi botyalo mali ePortugal, abasebenza kwindawo yokuhlala eyiyo ngabameli botyalo mali ePortugal, kunye neefem ePortugal.
Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo-mali ePortugal | Ukuhlala kwakhona ngabameli botyalo mali ePortugal | Ukuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo mali ePortugal | Ukuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo mali ePortugal | Ukuhlala kwakhona ngabacebisi botyalo mali ePortugal
Ithini inkcazo yokuba ngummi ngotyalo-mali ePortugal?
Ubummi ngotyalo-mali ePortugal, bunokuchazwa njengokufumana ubumi basePortugal ngotyalo-mali kuqoqosho lwasePortugal ngeendlela ezahlukeneyo ezinje ngeshishini, izindlu nomhlaba, iibhondi zikarhulumente, njl. Faka isicelo sokuba ngummi ngotyalo-mali ePortugal, ubummi ngenkqubo yotyalo-mali ePortugal exhaswa bubummi ngeenkonzo zotyalo-mali ePortugal, ngobumi bethu obugqwesileyo ngamagqwetha otyalo-mali ePortugal, abemi abangcono ngabameli bezotyalo-mali ePortugal kunye nobumi obugqwesileyo ngabacebisi botyalo-mali ePortugal. kubumi obugqwesileyo ngabameli botyalo mali ePortugal, kunye neefem zokubonisana nabantu abavela kwamanye amazwe ePortugal.
Iinkonzo zotyalo mali zokungena ePortugal | Amaxabiso afikelelekayo okufudukela ePortugal | Utyalomali olufikelelekayo kumagqwetha ePortugal | Utyalomali olufikelelekayo kumagqwetha ePortugal | Abatyali mali abafikelelekayo kwilizwe lase Portugal | Iifemu zomthetho ezingenaxabiso ezifikelelekayo ePortugal
Iyintoni inkcazo yepaspoti yesibini ePortugal?
Ipasipoti yesibini ePortugal, inokuchazwa njengokufumana ubumi obusemthethweni basePortugal ngotyalo-mali kuqoqosho lwasePortugal ngeendlela ezahlukeneyo ezifana, izindlu nomhlaba, ishishini, iibhondi zikarhulumente, njl. Faka isicelo sepasipoti yesibini eya ePortugal, inkqubo yesibini yokundwendwela iPortugal exhaswa Iinkonzo zokundwendwela zesibini ePortugal, ngokusebenzisa amagqwetha ethu esibini epasipoti ePortugal, abameli beepasipoti zesibini ezilungileyo ePortugal kunye nabacebisi besibini abaphuma phambili ePortugal, abasebenza kwiiarhente zokundwendwela zesibini ePortugal, kunye neefemu zabacebisi bamanye amazwe ePortugal.
Iinkonzo zokundwendwela yesibini zePortugal | Iiarhente zokundwendwela zesibini ePortugal | Amagqwetha esibini epasipoti ePortugal | Igqwetha lesibini lokundwendwela ePortugal | Abacebisi bokundwendwela besibini ePortugal
Yintoni inkcazo yevisa yegolide ePortugal?
IVisa yegolide ePortugal, inokuchazwa njengokufumana imvume yokuhlala ePortugal ngotyalo-mali kuqoqosho lwasePortugal ngeendlela ezahlukeneyo ezinje, iibhondi zikarhulumente, ishishini, izindlu nomhlaba, njl. Faka isicelo sevisa yegolide ePortugal, inkqubo yegosa yegolide yePortugal exhaswa yi Iinkonzo zevisa zegolide ePortugal, ngamagqwetha ethu abalaseleyo egolide ePortugal, amagqwetha egosa aphezulu egolide ePortugal kunye nabacebisi begosa abagqwesileyo begolide basePortugal, abasebenza kwiiarhente zevisa zegolide ePortugal, kunye neefem zokubonisana nabantu abafudukela ePortugal.
Iinkonzo zevisa ezimnandi zePortugal | Iiarhente zevisa ezimnandi ePortugal | Amagqwetha egosa egolide ePortugal | Amagqwetha egosa egolide ePortugal | Abacebisi ngevisa zegolide ePortugal
Lithini elona mali lisezantsi lokuhlala ngokutyala imali ePortugal?
Ubuncinci botyalo-mali kubuhlali ngokutyala imali ePortugal yi-EUR 350,000.
Ngaba uyayinika inkxaso yezomthetho iPortugal yokuHlala kwakhona ngokutyala?
Ewe, igqwetha lethu ePortugal kunye neearhente ePortugal zibonelela ngenkxaso yokuhlala kwakhona ngokutyala imali ePortugal.
Ngaba ukuhlala kwakhona ngokuTyala imali ePortugal kuyabiza?
Iindleko zokuHlala kwakhona ngokuTyala ePortugal kunye nokuHlala kwakhona ngeemfuno zengxowa mali zotyalo-mali zePortugal yeyabantu abaphezulu abaxabisekileyo, sihlawulisa kuphela umrhumo wokubonisana ngoBuhlali ngoTyalo-mali ePortugal, sikwabonelela ngezinye izinto ezininzi zokuxhasa ukuhlala kwakhona ngezisombululo zotyalo mali.
Leliphi ilizwe labahlali abanokufaka isicelo sokuhlala ngokutyala imali ePortugal okanye i-visa yomtyali mali ePortugal?
Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo-mali kunokusetyenziswa ngabemi beliphi ilizwe kodwa imizekelo embalwa kukuhlala ngokutyala imali ePortugal ukusuka eAsia, ukuhlala kwakhona kutyalo-mali ePortugal ukusuka e-Afrika, ukuhlala kwakhona ngokutyala imali ePortugal ukusuka eYurophu, ukuhlala kwakhona ngokutyala imali ePortugal ukusuka eMzantsi Melika, Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali ePortugal usuka eMalaysia, Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali ePortugal usuka e-Bangladesh, Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali ePortugal usuka e-Indonesia, Uhlala kwakhona ngokutyala imali ePortugal usuka eSri Lanka, Uhlala kwakhona ngokutyala imali ePortugal usuka eNepal, Uhlala kwakhona ngokutyala imali ePortugal usuka eIndiya naseBuhlali Ngotyalomali ePortugal ukusuka e-UAE.
Indawo yokuhlala yobungcali ngesiKhokelo kuTyalo-mali yePortugal
Cela ukubonisana simahla malunga nokuhlala kwakho ngoTyalo-mali ePortugal
Amagama abalulekileyo kubuhlali ngokuTyala imali ePortugal
URhulumente weNgingqi weAzores
TAP - Iindiza zeenqwelo moya zasePortugal
Iarhente yoTyalo-mali lwasePortugal kunye noThengiso lwangaphandle
Amaphepha amaPhuthukezi amaPhuthukezi
ICamões-Intsebenziswano kunye neZiko loLwimi
Indawo yaseYurophu yokuSebenza
Iziko loBhaliso kunye neeNgcali
Inkundla yoMgaqo-siseko yasePortugal
Inethiwekhi yothutho kaZwelonke
IZiko leNkcukacha-manani leLizwe
URhulumente weNgingqi waseMadeira
Uluntu lwamazwe angamaLwimi amaPhuthukezi
INkundla ePhakamileyo yezoBulungisa
Inkonzo yokufudukela kwelinye ilizwe kunye nemida
Umbutho wabameli bePortugal
Ubongameli beRiphabliki yasePortugal
Umbutho wabahlali base-Portuguese Notary
Ingqesho kunye neZiko loQeqesho loQeqesho
Unobhala welizwe lamaPhuthukezi
Igunya leRhafu kunye neNtengiso
Hlanganisa kwi ISebe lokuFudukela ePortugal , linoxanduva lokuqulunqa imigaqo-nkqubo yokukhawulezisa uMfuduko ePortugal